Otú Di na Nwunye Kwesịrị Isi Na-ekwurịta Nsogbu
ISIOKWU TETA! A Anyị Emewela Ihe Siiri Ọtụtụ Ndị Ike
ISIOKWU TETA! A Ime Ka Ndị Na-asụ Asụsụ Dị Iche Iche Nụ Ozi Ọma​—Otú Anyị Si Arụ Ọrụ Nsụgharị
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA Otú Di na Nwunye Kwesịrị Isi Na-ekwurịta Nsogbu
THE BIBLE'S VIEWPOINT Okwukwe
Olee Ihe Dị Iche na Nri Adịghị Mmadụ Mma n’Ahụ́ na Nri Adịghị Mmadụ Mma n’Afọ?
WAS IT DESIGNED? Olu Ndanda
‘Ozi Ọma A Ga-ezisa ná Mba Niile, n’Ebo Niile, Nakwa n’Asụsụ Niile’
Teta! | Nke 3 n'Afọ 2016
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
IHE NDỊ GA-ENYERE EZINỤLỌ AKA | DI NA NWUNYE
IHE MERE O JI ARA AHỤ́
Gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị na-ekwurịta nsogbu, ùnu na-akpasu onwe unu iwe kama idozi nsogbu ahụ? Ọ bụrụ otú ahụ, unu ga-emeli ka ihe ka mma. Ihe ga-enyere gị aka bụ ibu ụzọ ghọta ihe ụfọdụ na-aka ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị mkpa ma ha kwurịtawa okwu. *
IHE I KWESỊRỊ ỊMA
Ụmụ nwaanyị na-adị achọ ka di ha nụchaa ihe bụ́ nsogbu ha tupu e kwuwe ihe a ga-eme. O nwedịrị mgbe naanị ịkọ nsogbu ha na-eme ka okwu bie.
Otu nwaanyị aha ya bụ Ngozi * kwuru, sị: “Ọ na-akara m mma ma di m gee m ntị, ghọtakwa ihe m na-ekwu. M kwuchahaala ihe dị m n’obi, nsogbu m agwụla.”
Onyinyechi kwuru, sị: “Nsogbu m anaghị apụ m n’obi ma mụ akọrọghị di m otú ọ dị m. Ọ naghịzi enye m nsogbu n’obi ma m kọchaara ya.”
Oluchi kwukwara, sị: “Ọ na-abụ m na-akọ nsogbu m, mụ ana-echebara ya echiche ka m mara ihe kpatara ya.”
Ụmụ nwoke na-adị achọ ka e mewe emewe. Ihe mere ha ji eme otú ahụ bụ na ha na-ewere ya na ọ bụ ya ga-eme ka a ghọta na ha bụ nwoke. Ha na-echekwa na ọ bụ ya ga-eme ka nwunye ha na-abịa akọrọ ha nsogbu ọ bụla o nwere. Ọ bu ya mere ọ na-eji eju nwoke anya ma nwunye ya ekwetaghị ihe o kwuru a ga-eme maka ihe ọ kọọrọ ya. Otu nwoke kwuru na ya amaghị ihe mere nwunye ya ga-eji na-akọrọ ya nsogbu ya mgbe ọ na-achọghị ka ya gwa ya ihe a ga-eme maka nsogbu ahụ.
Ma, otu akwụkwọ e dere maka ndị di na nwunye kwuru, sị: “Mmadụ kwesịrị ibu ụzọ ghọta ihe a na-agwa ya tupu ya ekwuwe ihe a ga-eme. I kwesịrị igosi di gị ma ọ bụ nwunye gị na ị ghọtara ihe ọ kọọrọ gị nke ọma, gị emetekwara ya ebere, tupu gị agwawa ya ihe e nwere ike ime maka nsogbu ahụ. Mgbe ụfọdụ, ihe ọ chọrọ bụ naanị ka ị gee ya ntị nke ọma, ọ bụghị ka ị gwa ya ihe ọ ga-eme.”
Di kwesịrị ịna-ege nwunye ya ntị nke ọma. Otu nwoke aha ya bụ Ifeanyi kwuru na ya achọpụtala na ihe nwunye ya na-achọ mgbe ụfọdụ bụ naanị ka o gee ya ntị ma ghọta ihe ọ na-akọrọ ya n’agbanyeghị na e nwere mgbe ọ na-adị ya ka à ga-asị na naanị ige nwunye ya ntị agaghị eme ka ihe ka mma. Onye ọzọ aha ya bụ Ugochukwu kwuru na ya achọpụtakwala na obi na-adị nwunye ya mma ma ya gee ya ntị nke ọma, gharakwa ịnapụ ya okwu n’ọnụ. O kwukwara na ọ na-abụkarị nwunye ya kọchaara ya otú nsogbu ya dị ya n’obi, okwu ebie.
Megodị ihe a: Nwunye gị kọwara gị nsogbu ya, ya adịkwala gị ọkụ n’obi ịgwawa ya ihe ọ ga-eme maka ya. Na-ele ya anya ma ọ na-akọrọ gị ya, kweekwa n’isi ma ihe o kwuru daba n’ihe i chere. Kwughachi ihe ọ bụla gbara ọkpụrụkpụ o kwuru iji gosi ya na ị ghọtara ya. Otu nwoke aha ya bụ Chijioke kwuru na ihe na-abụ mkpa nwunye ya mgbe ụfọdụ bụ yanwa ịghọta ihe ọ na-akọrọ ya nke ọma ma gosi ya na ya kwụ ya n’azụ.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jems 1:19.
Nwunye kwesịrị ịna-agwa di ya ihe ọ chọrọ ka o meere ya ma ọ kọwara ya nsogbu ya. Otu nwaanyị kwuru, sị: “Nwaanyị nwere ike iche na di ya ma ihe dị ya mkpa, ma, ọ na-aka mma mgbe ụfọdụ ma o jiri ọnụ ya gwa di ya ihe ọ chọrọ ka o meere ya ma ọ kọwara ya nsogbu ya.” Nwaanyị ọzọ aha ya bụ Chinenye kwuru otú nwaanyị nwere ike isi agwa di ya ụdị ihe ahụ. O kwuru na onye ahụ nwere ike ịgwa di ya, sị: “E nwere ihe na-enye m nsogbu n’obi m chọrọ ịkọrọ gị. Ihe m chọrọ bụ ka i gee m ntị ma ghọta otú obi dị m, ọ bụghị ka ị gwawa m ihe m ga-eme.”
Megodị ihe a: Ọ bụrụ na di gị na-achọkarị ka e mewe emewe mgbe ị ka na-akọrọ ya nsogbu gị, echekwala na ọ chọghị iji ihe ị na-agwa ya kpọrọ ihe. Ọ ga-abụ na ọ chọrọ inyere gị aka. Otu nwaanyị aha ya bụ Nneoma kwuru na ya anaghị ewesawa di ya iwe ma o mee ụdị ihe ahụ. O kwukwara na ya na-ewere ya na ọ bụghị naanị ntị ka di ya chọrọ ige, kama na ihe ahụ metụrụ ya n’obi, ya achọkwa inyere ya aka.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Rom 12:10.
Di na nwunye kwesịrị ịna-emeso ibe ha otú ha chọrọ ka e si na-emeso ha. Ihe ga-eme ka ihe gaa siriri werere mgbe di gị ma ọ bụ nwunye gị na-akọrọ gị nsogbu ya bụ ibu ụzọ ghọta ihe ọ chọrọ ka i meere ya. (1 Ndị Kọrịnt 10:24) Otu nwoke kwuru, sị: “Di kwesịrị ịna-ege nwunye ya ntị. Nwunye kwesịkwara ịghọta na o nwere mgbe ụfọdụ di ya ga-achọ ịgwawa ya ihe a ga-eme ozugbo n’echeghị ka ọ kọchaara ya ihe niile. Ọ ga-abara ha abụọ uru ma ha buru ihe ndị a n’obi.”—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: 1 Pita 3:8.
^ para. 4 Anyị anaghị ekwu na ụmụ nwoke niile na ụmụ nwaanyị niile na-akpa àgwà otú e kwuru n’isiokwu a. Ma, ihe ndị e kwuru ebe a ga-abara onye ọ bụla lụrụla di ma ọ bụ nwunye uru ma ya na di ya ma ọ bụ nwunye ya na-ekwurịta okwu.
^ para. 7 Aha a kpọrọ ndị mmadụ n’isiokwu a abụghị ezigbo aha ha.
AMAOKWU BAỊBỤL NDỊ Ị GA-ECHEBARA ECHICHE
‘Bụrụ onye na-anụ ihe ngwa ngwa, onye na-adịghị ekwu okwu ngwa ngwa.’—Jems 1:19.
“N’inye ibe unu nsọpụrụ, na-ebutenụ ụzọ.”—Ndị Rom 12:10.
“Nweenụ otu obi, ka ihe banyere onye ọzọ na-emetụ unu n’obi.”—1 Pita 3:8.
M̀ KWESỊRỊ IKWU IHE A UGBU A?
Baịbụl kwuru, sị: ‘Lee nnọọ ka okwu e kwuru n’oge ya si dị mma!’ (Ilu 15:23) Ọ pụtara na okwu e kwuru n’oge na-ekwesịghị ekwesị nwere ike imebi ihe.
Otu onye kwuru, sị: “Okwu agaghị agaliri mmadụ abụọ siriri werere ma ọ bụrụ na ha na-ekwurịta ya n’oge na-ekwesịghị ekwesị.”
Onye ọzọ kwuru na di na nwunye ekwesịghị ikwuwe ihe dị mkpa mgbe ike gwụrụ otu n’ime ha ma ọ bụ mgbe agụụ na-agụ ya.
Otu nwaanyị aha ya bụ Ugomma kwuru, sị: “O nwere otu ụbọchị di m lọtara, mụ ebido ozugbo kọwara ya nsogbu m. Ka m na-akọ ya, mụ akwụsịtụ ma chọpụta na ihe ahụ m na-akọ adịghị ya mma n’obi. Agwaziri m ya na m ga-akọchara ya ihe ahụ ma anyị richaa nri. Ihe ahụ m mere tọrọ ya ụtọ, ya ekelee m. Mgbe anyị mechara kwụrịtawa ya, obi ka ruo anyị ala, ya aghọtakwa m nke ọma.”
Nkwurịta Okwu Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ
UNU GA-ENWELI OBI ỤTỌ N’EZINỤLỌ UNU
Chineke Ga-enyere Unu Aka Ịna-ebi n’Udo
Naanị ichebara ajụjụ abụọ dị mkpa echiche ga-enyere gị aka ka gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị na-ebi n’udo.
Nke 3 n'Afọ 2016 | Ime Ka Ndị Na-asụ Asụsụ Dị Iche Iche Nụ Ozi Ọma
TETA! Nke 3 n'Afọ 2016 | Ime Ka Ndị Na-asụ Asụsụ Dị Iche Iche Nụ Ozi Ọma
Otú Di na Nwunye Ga-esi Kwụsị Ịna-esekarị Okwu
Otú Di na Nwunye Ga-esi Kwụsị Ịna-agwa Ibe Ha Okwu Ọjọọ